Ukuzingela – The Ulwazi Programme
Ukuzingela kuwumdlalo njengeminye imidlalo ongabala kuyo imidlalo kanobhutshuzwayo, indlamu kanye neminye eyenza abantu bahlale bethokozile. Lomdlalo nawo uyabagwema abantu ekwenzeni izinto ezingalungile njengokuzinikela ekusebenziseni izidakamizwa kanye nasebugebengwini. Abantu abazingelayo babizwa ngokuthi amaphisi bazingela izinhlobonhlobo zezinyamazane kanti iningi lazo zitholakala emahlathini kanye nasezimobeni. Labo abasuke beyozingela baba amaqembu ahlukahlukene ukwenzela ukuthi uma iqembu ebelihamba phambili lihlulekile ukuvusa inyamazane elilandelayo likwazi ukuyivusa.
Amaphisi uma eyozingela ahamba nezinja zawo bese ephatha namawisa ukwenzela ukuthi uma inyamazane ivuke eduze bayijikijele, izinja zona zisiza kakhulu ekutholeni umkhondo lapho inyamazane ingakhona kanti futhi zinejubane elikhulu lokuyixhala uma ibaleka. Uhlobo lwezinja ezisetshenziswa ekuzingeleni amabhansi kanye namablaki. Inja eyiblaki iba mfishane bese iba namadlebe amade uma idla ahusha phansi, iblaki libukhali kakhulu ekuzingeleni – akwenzeki lingabuyi nenyamazane ehlathini. Uma inja iyibambile, iyayigada inyamazane kuze kufike umnikazi wayo ayithathe inyamazane ahambe nayo, noma esehamba nayo inja iyalandela ngemuva kanti ezinye aziyinaki leyomyamazane ngoba isuke isifile.
Izinhlobo Zezinyamazane Ezizingelwayo
Izinyamazane ezizingelwayo yilezo ezidliwayo kuphela, singabala izimpunzi (impunzi ihlupha kakhulu ngokudla ubhontshisi emasimini), unkonka (unombala omatulwa, uyingozi futhi uyahlaba), imbabala (ibomvu kanti ayinazo izimpondo), umhlangala, insimba, igqalashu, ivondwe, imvunzi (lolu uhlobo lwezinyamazane ezihlupha kakhulu ngokudla izinkukhu). Zonke lezizinyamazane zitholakala emahlathini nasezimobeni.
Izinkinga Ezivela Uma Kuzingelwa
Nasekuzingeleni zikhona izinkinga ababhekana nazo uma amaphisi ezingela. Kunezinyoka ezikhona emahlathini eziyingozi, kuyenzeka kwesinye isikhathi inja ishaywe inyoka ife. Nezinye izilwane ezilimaza izinja njengenkawu (inkawu iyayikwebha inja), ingulube yehlathi kanye nengungumbane (ingungumbane yona ikhipha ameva ahlabayo). Inja uma ilimele ayibe isakwazi ukuzingela kahle.
Abantu abazingelayo bavuka ekuseni kakhulu uma beyozingela ngoba basuke benzela ukuthi bazifice izinyamazane zingakavuki ezikhundleni zazo. Sikhona isikhathi okungazingelwa ngaso onyakeni, lesosikhathi kuba isehlobo. Kunzima ukuzingela ehlobo ngoba kusuke kwenile, izinja azikwazi ukugijima kanti nezinyamazane azibonakali ngenxa yotshani obusuke bukhule kakhulu. Kanti ebusika kusuke kushisiwe emahlathini, kukhanya kahle. Inyamazane iyaphekwa umnikazi wayo bese ebiza amanye amaphisi aze koyidla, izinja zona ziphiwa isobho kanye namathambo.
Categories Culture Tags Imidlalo, Imidlalo yomdabu, indigenous games, Sport